तरकारी प्यापिलोट स्वादिष्ट! | ThermoRecines
Verduras30 मिनेट2 व्यक्ति145२ क्यालोरी
यस बिन्दुमा हामी सबैलाई कसरी तयार गर्ने थाहा छ तरकारी प्यापिलोट। यो एक धेरै सरल र स्वस्थ नुस्खा हो, जहाँ तरकारीहरू पकाइन्छ उमालेको यसको आफ्नै रसको साथ, यसको भिटामिन र खनिजहरूको ठूलो अंश कायम राख्दै।
आजको नुस्खाले यसको रूपमा काम गर्न सक्छ गार्निश वा जस्तो पहिलो पाठ। तर सबै भन्दा राम्रो कुरा यो यो vinaigrettes वा स्वाद थपिन्छ कि सॉस संग परोस गर्न सकिन्छ। यहाँ मेरो मनपर्ने चयन छ:
दही सॉस: यो सास मेरो भान्छाको मुख्य हो। पूर्ण रूपमा मासु र तरकारीको साथ।
वाटरक्रिस र अखरोट पेस्तो सॉस: यो पास्ताको लागि तर तरकारीका लागि पनि उत्तम छ। अखरोट को crunchiness आज हाम्रो प्यापीलोट बनावट थप गर्दछ।
एवोकैडो आइओली: हाम्रो तरकारीहरूको लागि वास्तविक आनन्द। लसुनले मसलाको एक बिट थप्छ र यस ससको चिल्लो बनावट स्टीम्ड सब्जीको साथ पूर्ण रूपमा मिसाउँदछ।
मस्टर्ड सॉस: अर्को चिकनी, पिघलने सॉस व्यक्तित्वको साथ।
रोमस्कु सॉस: परम्परागत खानाको क्लासिक जुन हामीलाई माछा र हाम्रा तरकारी दुवैका लागि काम गर्दछ।
अब हामीसँग सॉस छ, हामीले केवल ती चीजहरू बारे निर्णय गर्नुपर्दछ जुन हामी तरकारीको प्यापीलोट बनाउने छौं। मैले लीक, गाजर, हरियो मिर्च र च्याउको लागि रोजेको छ तर तपाईले चाहेको जे पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग हुनु पर्छ सावधानी लसुन र टमाटर संग। पहिलो किनभने यसले थालमा धेरै स्वाद दिन सक्छ र दोस्रो किनभने यसले धेरै पानी निकाल्छ। छनौट तपाईंको हातमा छ!
1 तरकारी प्या प्यालोट र sa सस
तरकारी प्यापिलोट एक स्वस्थ र स्वस्थ नुस्खा हो जसबाट हामी धेरै पाउन सक्छौं।
तयारी समय: 13M
खाना पकाउने समय: 17M
१ लीक (केवल सेतो भाग)
हामी चिसो पानीको मूलको मुटुलाई राम्रोसँग सफा गर्छौं ताकि त्यहाँ बालुवा नहोस्। हामी पनि भत्काइएको गाजर र खुर्सानी धुन्छौं। हामी भित्री बीउ हटाउँछौं। हामीले पातबारीमा सबै तरकारीहरू काट्यौं। यदि हामीसंग यो छ भने हामी भाँडा प्रयोग गर्न तरकारी नूडल्स वा स्पेगेटी बनाउन सक्छौं।
हामी च्याउलाई राम्ररी सफा गर्छौं र पातलो नभएको स्लाइस गर्छौं।
हामीले चर्मपत्र कागज वा बेकिंग कागजको दुई टुक्रा काट्यौं। हामी तरकारीहरू राख्छौं र माथि हामी मशरूमहरू वितरण गर्दछौं। हामी स्वाद गर्न तेल र मौसम संग पानी।
हामी कागज मोड्छौं र प्याकेज बनाउँदै यसलाई बन्द गर्दछौं। हामीले प्याकेजहरू वरोमामा राख्यौं।
हामी पहिलो मार्क, १/२ लिटरसम्म पानीले गिलास भर्छौं। हामी बन्द गर्छौं, वरमालाई यसको स्थिति र कार्यक्रममा राख्छौं Minutes मिनेट, Varoma तापमान, गति १। यस समयको साथ हामीसँग केही पकाइएको तर क्रिची तरकारीहरू छन्। यदि हामी उनीहरू नरम चाहन्छौं भने, हामी खाना पकाउन २ वा minutes मिनेट जति लामो गर्न सक्दछौं तर २० मिनेट भन्दा बढि पनी। यस चरणमा हामी लाभ लिन र गिलास मा अर्को नुस्खा तयार गर्न सक्नुहुन्छ। म प्राय: क्रीम वा केही स्टू बनाउँछु। प्याकेजहरू बन्द भएपछि, न त गन्ध वा रस प्रसारित गरिन्छ।
समयको अन्त्यमा, हामी होशियारीपूर्वक वरोमा खोल्छौं र प्याकेजहरू हटाउँछौं यदि आफैलाई जलाउन नदिन सावधान रहन्छ। हामी प्रत्येक प्याकेजलाई एकल प्लेट वा प्लेट्टरमा राख्छौं र तिनीहरूलाई सेवा दिन्छौं। हामी यी तरकारीहरू सँगसँगै अघिल्लो कुनै पनि सस प्रयोग गर्न सक्छौं।
थप जानकारी - दही सॉसको साथ टेंडरलिन र हरियो सिमीहरू / वाटरक्रिस र अखरोट पेस्तो सॉस / एवोकैडो आइओली / एप्पल गार्निशको साथ रायोको कुखुरा / रोमस्कु सॉस
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सलाद र तरकारीहरू, १/२ घण्टा भन्दा कम, वरोमा रेसिपीहरू, शासन, साल्सास, भेगन, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सलाद र तरकारीहरू » तरकारी प्या प्यालोट र sa सस
कस्तो स्वादिष्ट र स्वस्थ रेसिपी। तर ... चर्मपत्र कागज वा चर्मपत्र कागज प्रयोग गर्नुको सट्टा, तपाई प्यापिलोट्स बनाउन एल्युमिनियम पन्नी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
कोकिनितासलाई जवाफ दिनुहोस्
अवश्य पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। वास्तवमा, यदि तपाईं एल्युमिनियम पन्नी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई बन्द गर्न यो धेरै सजिलो छ, जबकि टेबलमा प्रस्तुतीकरण त्यति राम्रो छैन। त्यसोभए तपाईं निर्णय गर्नुहोस्: व्यावहारिकता बनाम प्रस्तुतीकरण !!
मलाई रेसिपी मनपर्दछ, तरकारीहरू उत्तम राम्रो हुनुपर्दछ, तर के तपाईं सॉसको लागि व्यंजनहरू राख्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईं सॉसको नाममा क्लिक गर्नुभयो भने, यो तपाईंलाई सीधै रेसिपीहरूमा लैजान्छ ताकि तपाईं उनीहरू कसरी बनेको देख्नुहुनेछ।
म आशा गर्दछु कि तपाईं यस स्वस्थ र सजिलो नुस्खाको साथ खुशी हुनुहुन्छ।
मेलाजाने एला पार्मीगियाना